Tijaabooyinka Google ee Google Analytics ... Meh | Martech Zone
Google Website Optimizer waa kaput, oo lagu beddelay Google Experiment. Iyada oo la adeegsanayo Tijaabooyinka Mawduuca, waxaad isbarbar dhigi kartaa sida bogagga shabakadaha kala duwan ay u sameeyaan iyadoo la adeegsanayo muunad nasiib ah oo booqdayaashaada ah, qeex inta boqolkiiba ee booqdayaashaada ay ku jiraan tijaabada, dooro ujeeddada aad rabto inaad tijaabiso iyo, ugu dambeyntiina, sidoo kale waad heli doontaa ku cusbooneysiin emayl ku saabsan sida tijaabadaadu u socoto.
Waa kuwan muuqaalka muuqaalka ee Tijaabooyinka Google:
Sida casriyeynta iyo ballaadhinta ah sida Google Analytics u noqotay, runti waqti adag ayaan kula jiraa tijaabooyinka Google. Waa ra'yigeyga oo keliya, laakiin dhab ahaantii ma fahmin sababta Google uu tan uga tegey heer URL bog ah. Shirkadaha badankood waxay adeegsadaan nidaamyada maareynta maadooyinka maalmahan waana xanuun in la sameeyo bogag badan, mid walbana laga hor istaago matoorada raadinta, lana horumariyo habab wadista gawaarida si aan kala sooc lahayn u dhexeysa.
Inta badan bogagga shabakadda waxaa loo horumariyaa, ma aha halbeeg dhan, laakiin waa bog leh sawirro kala duwan, nuxurro, qaybo, badhanno, wicitaanno ficillo, iwm. Google ayaa ka wada hadlaysa content ku habboonaanta bogga Tijaabooyinka Google, laakiin intaad ku dhex-dhexaadin karto adoo beddelaya walxaha qaar ee bogagga la daabacay, way fiicnaan laheyd haddaan tijaabin lahaa walxaha halkii aan ka tijaabin lahaa bogga oo dhan laftiisa.
Miyaad gelisay Tijaabooyinka Google inay shaqeeyaan? Miyaan wax ka maqanahay?
Tags: imtixaanka ababn imtixaantijaabooyinkaAnalytics googletijaabooyinka googlegoogle +baaritaanka bogga